Print Page - Jharana Thapa - photos and profile
xNepali Forum => Celebrity profile => Topic started by: tundikhel on August 18, 2009, 01:20:39 PM
Title: Jharana Thapa - photos and profile
Post by: tundikhel on August 18, 2009, 01:20:39 PM
Actress Jharana Thapa has been nominated as brand ambassador for the End Water Poverty campaign,acoalition of NGOs working in the water and sanitation sector in Nepal.
In November she participated in the third South Asian Conference on Sanitation (SACOSAN III) in New Delhi, India.
Since the conference, Jharana Thapa not only makes speeches on sanitation. When she visits villages to shoot films, she always tries to promote good sanitation practices, asking if there isaclean toilet and whether people wash their hands with soap and water after going to the toilet. She is particularly aware of the problems facing girls. "Due to toilet problem, many girl students do not drink water during school hours," said Jharana. "Girls feel uncomfortable during periods and the toilet problem might causeamental problem." Jharana advises girl students not to feel ashamed and talk to the school management to arrange separate toilets for them.
Title: Re: Jharana Thapa - photos and profile
Post by: tundikhel on August 18, 2009, 01:21:13 PM
Post by: tundikhel on August 18, 2009, 01:21:54 PM
Post by: tundikhel on August 18, 2009, 01:26:30 PM
Post by: tundikhel on August 18, 2009, 01:28:05 PM
Post by: tundikhel on August 18, 2009, 01:29:31 PM
Post by: tundikhel on August 18, 2009, 11:43:52 PM
Fem Botanica KTV Film awards 2065. Initiated by Nepal Film Technician Association in collaboration with Kantipur Television, the event was held at Hotel Soaltee Crowne Plaza. The winners are:
Best Actor Female - Jharana Thapa for Takdir
Best Actor Male - Nikhil Uprety for Yuddha
Best Film - Takdir
Best Director - Dipak Shrestha for Takdir
Jury's Choice of Film - Ahankar
Best Choreographer - Basanta Shrestha for Devarbabu
Lifetime Achievement Award - Basanta Jung Rayamajhi and Uddhab Poudel
Best Editor - Tara Thapa for Kismat
Best dialogue - Bikash Acharya for Daiko Sasurali
Best Screenplay - Suraj Subba for Takdir
Best Story - Dhanmaya Dakhal for Ahankar
Best Fight Director - Hemanta KC
Best Debut Director - Shyam Bhattarai for Maryada
Best Debut Actor Male - Raj Ballav Koirala for Parkhi Basen
Best Debut Actor Female - Ranjana Sharma for Maryada
Best Actor in Negative role - Sunil Dutta Pandey for Ram Balram
Best Cinematographer - Raju Bikram Thapa
Best Actor in Comedy Role - Bhuwan KC for Chor Sipahi
Best Child Actor - Ishan Raot (jire)
Best Music Director - Suresh Adhikary for Parkhi Basen
Best Singer Male -Yam Baral for Naya Nepal
Best Singer Female - Anju Panta for Bhun Bhun Bhamara
Best Lyricist - Dayaram Pandey for Darr
Best Music Recorder - Mukesh Shah for Kismat
Best Background Music - Anil Gautam and Manoj Bhandari
Best Supporting Actor Male - Shiva Shrestha for Yudhha
Best Supporting Actor Female - Arunima Lamsal for Maryada
Best Character Actor Male - Keshab Bhattrai
Best Character Actor Female - Mithila Sharma
Best Art Director - Singhe Lama
Best Dress Designer - Tarunika Mahato
Best Makeup Artiste - Ravi KC
Ramit Dhungana and Jharana Thapa
Maina Raja-Nepali movie song"Hungama"
Udit & Sadhana:-बगैंचामा नजाउ तिमि
shree krishna and jharana thapa
Post by: tundikhel on August 18, 2009, 11:51:58 PM
DILIP RAYAMAJHI & JHARANA THAPA in
movie - indreni
Song - yo garu ki
Singers - shambhujit baskota and sharmila bardewa
Mansirai Mahina Aayo Hai Saathi.
By Shree Krishna Shrestha & Jharana Thapa.
Singers: Shambhujit & Devika
Movie: Hami Tin Bhai
Cast: Sri Krishna Shrestha & Jharana Thapa
Song - Kalkal Khola Nepali
Song - Boli Bachan Sarai Mitho
Cast: Dilip & Jharana Thapa
Song - Mussukai Hasayou
Cast: Shree Krishna Shrestha & Jharana Thapa
Song - Kathmandu Ko Nau Tale Dharara
Movie: Sukha Dukha
song - Kya Gajab Ko Baat
Nidra Chhaina Bhok Chhaina
Post by: kurakani on August 20, 2009, 04:41:00 AM
छोटो-मीठो कुराकानी with झरना थापा
Issue - 35 (भदौ २०६२) issue of Nari
* अचेल केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
चलचित्रमै व्यस्त छु ।
* आफूले अभिनय गरेको कुन चलचित्रबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
'मेरो हजुर' बाट ।
* चलचित्र कत्तिको हेर्नुहुन्छ ?
प्रायः नेपाली र हिन्दी चलचित्रहरू हेरिरहेकै हुन्छु ।
* युवाहरूको कुन कुराले तपाईंलाई आकषिर्त गर्छ ?
गम्भीर-अटल, स्वाभिमानी र नैतिकतामा चल्ने स्वभावले ।
* यो क्षेत्रमा लागेर के पाउनुभयो र के गुमाउनुभयो ?
गुमाउनुभन्दा धेरै पाएकी छु । आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन सफल भएकी छु । तर कहिलेकाहीँ परिवारलाई त्यति समय दिन नपाएकोमा दुःख लाग्छ ।
* मानिसहरूलाई थाहा नभएको तपाईंको एउटा कुरा ?
धेरैले मलाई घमन्डी छे, बोल्दिन भन्छन् तर म त्यसको ठीक विपरीत छु ।
* फिल्म लाइनका मिल्ने साथीहरू ?
सबैजना मिलनसार नै हुनुहुन्छ । निरुता, जल, विपना, श्रीकृष्ण, दिलीप रायमाझी, सुशील क्षेत्री आदि ।
* भगवान्प्रति कत्तिको आस्था छ ?
एकदम आस्था छ, श्रद्धा गर्छु ।
* व्रत बस्नुहुन्छ ?
* घरमा कत्तिको काम गर्नुहुन्छ ?
भ्याएसम्म सबै गर्छु ।
* मीठो गरी के पकाउनुहुन्छ ?
पकाउन नआउने त होइन तर मीठो नै पकाउँछु भन्ने छैन ।
* कत्तिको झूटो बोल्नुहुन्छ ?
बेलामौकामा झूटो पनि बोल्छु ।
* कुन कुरामा रिस उठ्छ ?
कुरै नबुझी आवेशमा आउने, पछाडि कुरा काट्ने, अगाडि आएर भन्न नसक्ने मानिस देखेर रिस उठ्छ ।
* युवामा नभएको युवतीको गुण भन्नुपर्दा...?
* फुर्सदको समय कसरी बिताउनुहुन्छ ?
आफ्नै परिवार र छोरीसँग घुम्न गएर, गीत-संगीत सुनेर ।
* तपाईंको सुन्दरताको राज ?
क्लब जान्छु, सधै एक्सरसाइज गर्छु । फलफूल र पानी प्रशस्त खान्छु ।
* तपाईंको नराम्रो बानी ?
त्यस्तो नराम्रो बानी भएजस्तो त लाग्दैन ।
* कुन ड्रेसअपमा आफूलाई सबैभन्दा राम्री महसुस गर्नुहुन्छ ?
Post by: kurakani on August 20, 2009, 04:47:06 AM
Post by: kurakani on August 20, 2009, 04:49:49 AM
Post by: kurakani on August 20, 2009, 04:55:32 AM
Post by: xsajha on October 20, 2009, 04:16:11 AM
Post by: tundikhel on October 27, 2009, 03:05:03 AM
Post by: tundikhel on October 30, 2009, 02:55:00 AM
Post by: kurakani on November 02, 2009, 12:49:39 PM
Post by: tundikhel on November 15, 2009, 02:33:14 PM
Post by: tundikhel on November 27, 2009, 06:53:13 AM
Post by: tundikhel on November 27, 2009, 02:46:23 PM
Post by: tundikhel on January 14, 2010, 07:10:05 AM
Post by: tundikhel on January 28, 2010, 11:08:21 AM
Post by: tundikhel on March 15, 2010, 11:41:55 AM
Post by: tundikhel on March 15, 2010, 11:42:07 AM
Post by: tundikhel on March 15, 2010, 11:43:21 AM
Post by: winkantipur on May 01, 2010, 12:18:56 AM
Post by: tundikhel on May 27, 2011, 08:41:35 AM
Post by: tundikhel on October 28, 2011, 01:01:34 PM
Post by: tundikhel on April 11, 2012, 01:41:00 PM
Post by: tundikhel on August 22, 2012, 08:55:25 AM
Post by: tundikhel on September 17, 2012, 01:54:40 AM
Post by: tundikhel on October 22, 2012, 01:47:50 AM
नायिका झरना थापा पनि केही दिन अघि मापसे चेकिङमा
नायिका झरना थापा पनि केही दिन अघि मापसे चेकिङको फन्दामा परिन् । राती कतै कार्यक्रमबाट फर्किरहेकी उनलाई देख्ने बित्तिकै प्रहरीले रोकेका थिए ।
सुरुमा त आफु कलाकार भएको र मापसे गरेको छैन भन्दै झरना चेकिङबाट पन्छिन खोजिन् । तर प्रहरी किन मान्थे र, झरनाको कुरामा विश्वास नलागेर उनीहरुले ब्रेथलाइजर नै उनको मुखमा तेर्साए ।
चेकिङ लगत्तै मापसे नाप्ने मेसिन ब्रेथलाइजरले जिरो देखाए पछि भने उनी ढुक्क हुँदै घर तर्फ लागिन् । मापसे चेकिङ गरिरहेको तस्वीर कसैले फेसबुकमा अपलोड गरि दिए पछि फेसबुक प्रयोगकर्ताबीच झरनाको उक्त तस्वीर चर्चाको विषय बनेको छ ।
Post by: tundikhel on December 09, 2012, 02:30:50 AM
Post by: tundikhel on February 21, 2013, 10:12:08 PM
Australia hot photo..
Title: Success secret of Jharana Thapa
Post by: 00t on August 09, 2014, 11:45:09 PM
Actress Jharana Thapa isareligious person. She worships gods everyday. She also consults astrologers before starting any new tasks. Every plans she made are usually according to the suggestion of astrologers. Jharana believes that being religious is to think positively of others, help those who need help and being positive. Although she is not […]
Source: Success secret of Jharana Thapa (http://nepaliactress.com/success-secret-of-jharana-thapa/)
Post by: tundikhel on March 28, 2015, 08:07:02 AM
Happy Birthday Jharana Thapa !!
Jharana turns 36
photos here -->http://nepaliactress.com/happy-birthday-jharana-thapa/
Last year on her birthday (http://xnepali.net/movies/jharana-thapa-announces-to-direct-movie-on-her-birthday/) she had announced film direction. So far, she hasn't started the direction.
I wish she will do that this year. Happy Birthday
Post by: tundikhel on July 12, 2015, 12:54:51 PM
20 years married ...
more photos --> http://xnepali.net/movies/jharana-thapa-and-sunil-celebrate-20th-marriage-anniversary-in-nagarkot-photos/
Daughter feeds cake to Jharana
Post by: sag on October 01, 2015, 03:01:25 PM
चलचित्र 'दाइजो'बाट सिनेमा क्षेत्रमा हाम फालेकी नायिका झरना थापाले एक सयभन्दा बढी फिल्ममा अभिनय गरिसकेकी छिन् । निर्माता सुनील थापासँग विवाह गरेकीले पनि हुनसक्छ, उनलाई यो क्षेत्रमा टिक्न सजिलो भएको छ । समकालीन नायकसँग मात्रै होइन नव प्रवेशीहरुसँग समेत उनले सिनेमा खेल्ने अवसर पाएकी छिन् । आफ्नै सिनेमा 'फेसबुक'मा खुलेको उनको गेटअपको चर्चा सेलाउन नपाउँदै अर्को सिनेमाको गीतमा उत्तेजक दृश्य दिएकी छिन, झरनाले । त्यसैले उनलाई बुढेशकालकी सेक्सी नायिका समेत भनिन थालिएको छः
यो उमेरमा आएर सेक्सी नायिका भन्दिंदा कस्तो लाग्दो रहेछ ?
-लामो हाँसोपछि) रमाइलो लाग्छ । मैले त आफ्नो भूमिका सुहाउँदो काम गरिरहेको हुन्छु । अरुको कमेन्टप्रति त्यति वास्ता गर्दिन ।
तर धेरैले त झरनाको जवानी फर्किएछ भन्छन् होइन ?
मैले समाजलाई पच्दै नपच्ने हट सिन दिएकी छैन । पहिले पनि मैले स्कट, पाइन्ट लगाएर नाचेकी थिएँ । अहिले गेटअपमा थोरै परिवर्तन भयो होला ।
यस्तै सिन दियो भनेमात्रै चर्चा पाइन्छ नि फेरि ?
चर्चाका लागि म त्यस्तो गर्दिन । सिनले भन्दा पनि कामले चर्चा पाउने हो ।
यौनसँग सम्बन्धित सिनेमा बनाउने लहर चलेको छ । यस्तो प्रवृत्तिलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
यस्ता मुभी बन्नु राम्रो होइन । यसले समग्र चलचित्र क्षेत्रलाई नै घाटा भईरहेको छ । केही महत्वकांक्षी व्यक्तिका कारण हामीले समेत बद्नाम हुनुपरिरहेको छ । समाज, संस्कार सुहाउँदो सिनेमा बनाउने र खेल्ने गर्नु पर्छ ।
अर्कोतिर सरकाले एक करोडमा बन्ने र १५ लाखमा बन्ने सिनेमालाई एउटै हलमा देखाउन दिनु भएन । फिल्मको विषयवस्तु अनुसार वर्गीकरण गरिदिए भइहाल्यो नि । कम्तीमा १४/१५ वर्ष संघर्ष गरेर आएका हाम्रो बद्नाम त हुने थिएन । नायिका भनेर सडकमा हिंड्न समेत गार्‍हो भइसक्यो ।
किन यस्तो भएको हो ?
नयाँ कलाकारले कुरा नबुझेर । हिरो हिरोइन भइन्छ भनेर निर्माता निर्देशकले जे भन्यो त्यही मान्दा यस्तो भएको हो ।
कसरी कुरा नबुझेका होलान् नयाँ कलाकारले ?
उनीहरुलाई यहाँ भित्रका धेरै कुरा थाहा हुँदैन । खाली पर्दामा हिरोहिरोइन हुने सपना मात्रै हुन्छ । हिरोहिरोइन बन्ने भन्दैमा दंग हुन्छन् । जसले जे भन्यो त्यही गर्न राजी पनि हुन्छन् । बेहोसीमै हट सिन दिन्छन् । पछि सार्वजनिक भएपछि आलोचना हुँदा मात्रै उनीहरुलाई आफ्नो कमजोरी थाहा हुन्छ । धेरै नयाँ कलाकारले अहिले मैले त्यस्तो दृश्य दिएकै छैन भन्नुको अर्थ त्यही हो । दिने बेला होश हुँदैन । होश खुलेपछि केही गर्नसक्ने अवस्थै रहँदैन ।
नायिकाको उमेर र सिनेमामा काम पाउनेबीच कस्तो सम्बन्ध हुँदोरहेछ ?
म 'एक्सन'को सुटिङ सक्नासाथै 'नो स्मोकिङ'मा व्यस्त हुनेछु । उमेर उकालो लागेपनि मेरो काम दर्शकले मन पराइदिनुभएकोले मैले फुर्सद बस्नुपर्‍या छैन ।
आफै निर्माता नभएको भए त गार्‍है पथ्र्यो होला नि ?
खै त्यो त कसरी भनूँ । शुद्ध कलाकार मात्रै भएर टिक्नेबारे मैले सोचेकै छैन ।
Post by: tundikhel on December 12, 2015, 06:07:14 AM
पहिलो फिल्ममा धेरै “टेक” खाएँ
बच्चैदेखि डान्स गर्न भनेपछि हुरुक्कै हुन्थेँ । त्यसैले कतै गीत बज्यो भने मेरा खुट्टा र कम्मर हल्लिहाल्थे । हिरोइन नै हुन्छु भन्ने सोच त थिएन । तर, पछि माहोल मिल्दै आयो । अनि अभिनयमा लागेँ । डान्समा रुचि भएकाले पिके कलेजमा डान्स विषय लिएर डिप्लोमा गरेँ । कलाकार बन्ने चाहना त थियो । तर, फिल्मी कुरा केही आउँदैनथ्यो मलाई । कसो–कसो दयाराम दाहालको निर्देशनमा बनेको ‘दाइजो’ फिल्ममा अभिनय गर्ने मौका पाएँ । त्यसमा मेरो छोटो भूमिका थियो । केही मेसो नपाए पनि काम गरेँ । सुटिङ त सकियो । तर, रिलिज भने धेरैपछि मात्रै भयो । दाइजोमा पहिलो सट दिँदाखेरिको सम्झना ताजै छ मलाई । त्यतिवेला फिल्म रिलमा खिचिन्थ्यो । निर्देशक दयाराम दाइले मलाई कसरी अभिनय गर्ने भन्ने सिकाउनुभयो । उहाँको पनि त्यो पहिलो फिल्म थियो । पहिलो सट दिँदा म निकै नर्भस भएँ । के गर्ने भन्ने नै बिर्सिएछु । निर्देशकले एक्सन भनेपछि अभिनय गर्नुपर्नेमा म त अलमलमा परेछु । त्यसैले धेरै टेक खाएँ । त्यो फिल्म मेरा लागि ‘ट्रायल’ थियो । तर, समयमा रिलिज भएन । त्यसपछि आफ्नै प्रोडक्सनमा ‘धर्मसंकट’ फिल्म निर्माण गरियो । त्यसबाट भने म हिरोइनका रूपमा ‘डेब्यु’ भएँ । त्यस फिल्ममा म डान्स गरेको ‘मलाई नेपाली माया चाहिन्छ’ बोलको गीत निकै हिट भयो । त्यसपछि भने फर्केर हेर्नुपरेको छैन । अहिलेसम्म झन्डै एक सय फिल्ममा अभिनय गरिसकेकी छु ।
Post by: tundikhel on June 27, 2016, 01:21:21 PM
मेकअपले नाकको दाग छोप्छु
चैत्र ६, २०७१-१७ वर्षको उमेरमा चलचित्र 'दाइजो' बाट अभिनय यात्रा प्रारम्भ गर्ने नायिका झरना थापा विगत डेढ दशकदेखि चलचित्रमा सक्रिय छिन् । एक सयभन्दा बढी नेपाली चलचित्रमा मुख्य नायिकाको भूमिका निर्वाह गरिसकेकी झरना कुशल नृत्यांगना पनि हुन् । चलचित्र निर्माता सुनिल कुमार थापासँग वैवाहिक जीवन प्रारम्भ गरेपछि नै झरनाको अभिनय करियरले गति लिएको थियो । एक छोरीकी आमा झरना आज पनि राम्रो अभिनय गर्न सक्ने नायिकाका रूपमा परिचित छिन् । पछिल्लो समय श्रीमान्सँग मिलेर चलचित्र निर्माणमा समेत व्यस्त झरनाले साप्ताहिकसँग आफ्ना सेक्रेट कुरा सार्वजनिक गरेकी छिन् ।
चलचित्र 'जीवनसाथी' मा पाएको पारिश्रमिक नै मेरो जीवनको पहिलो कमाइ थियो । उक्त चलचित्रबाट मैले ३५ हजार रुपैयाँ पाएकी थिएँ । म त्यो पैसा पाएको दिन खुसी हुँदै मम्मीकहाँ पुगेकी थिएँ ।
मैले पहिलो पटक निर्देशक प्रकाश सायमीको एउटा टेलिश्रृंखलाका लागि क्यामेरा फेस गरेकी थिएँ । विडम्बना के भयो भने म उक्त श्रृंखलाबाट निकालिएँ, कारणचाहिं अहिलेसम्म थाहा छैन । अडिसनबाट बाहिरिनुपर्दा पहिलो गाँसमै ढुंगा लागेको त पक्कै हो तर मैले कहिल्यै हिम्मत हारिन ।
बाह्र हाते नायिका
चलचित्र 'मुग्लान' को गीत 'आज बाह्र हाते पछ्यौरी' को भारतको गोवामा छायांकनको पहिलो दिनको पहिलो सटमै मेरो दाहिने खुट्टा फ्याक्चर भयो । डाक्टरले १० दिन अनिवार्य बेड रेस्ट गर्ने सुझाव दिएका थिए तर पनि मैले पीडा सहँदै नृत्य गरेर छायांकन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेँ । अहिले मेरो जीवनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण गीत नै त्यही बन्न पुग्यो ।
चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गरेलगत्तै मलाई अधिकांश निर्माता, निर्देशक तथा दर्शकले समेत 'दुब्ली' भन्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो । त्यो बेला म मोटाउन दिनमा चारवटा अन्डा, चारवटा केरा, चार गिलास दूध पिउँथे, त्यो पनि दिनको चार पटक । मेरो खानपिनको उक्त रुटिन केही वर्षसम्म चल्यो ।
म कलेज अध्ययरत छँदा असाध्यै बदमास थिएँ । सिफल (घर) बाट ज्ञानेश्वर हुँदै बागबजार (पद्मकन्या कलेज) जाँदा बिहान अँध्यारै हुन्थ्यो । मलगायत चार-पाँच जना साथी घर-घरको डोरबेल बजाउँदै हिंड्थ्यौं । हामीले त्यसरी दु:ख दिन थालेपछि एक दिन एउटा घरको गेटपाले घण्टी बजाउने मान्छेलाई समात्ने गरी बसेका रहेछन् । मैले घण्टी थिच्नै लाग्दा च्याप्प मेरो हात समाते । बल्ल-तल्ल साथीहरूले मलाई छुटाए । त्यो दिनदेखि बदमासी गर्न पनि छाडियो ।
स्कुले जीवनमा मलाई सुईवाला घडी हेर्न आउँदैनथ्यो । मलाई घडी हेर्न नआएको थाहा पाएपछि कक्षाका केटाहरूले मलाई जिस्क्याए । असह्य भएपछि मैले केही केटालाई पिटिदिएँ । कक्षाभरि हल्ली-खल्ली भयो । शिक्षक आएपछि मलाई कुखुरा बनाउनुभयो । त्यस क्रममा मैले लगाएको पाइन्ट च्यातियो । पाइन्ट च्यातिएपछि शिक्षकसहित सबै हाँस्न थाले भने मचाहिँ रुन थालें ।
दुई वर्षको छँदै मेरो नाकमा ठूलो चोट लाग्यो । त्यो चोटको दाग अझै पनि मेरो नाकको माथिल्लो भागमा छ । चलचित्रमा मेकअपले छोप्ने गरेकी छु । अहिले पनि मेकअप नगरेका बेला त्यो दाग देखिन्छ । चोट लागेपछि मेरी आमा थुप्रै रात रुनुभएछ । म सुतेको बेला मेरो अनुहार हेर्दै अब मेरी छोरीको रूप नै गयो, सबैले नाक कटुइ भन्दै जिस्क्याउँछन् भन्दै रुनुहुँदो रहेछ । आज म नायिकाका रूपमा स्थापित भएपछि आमा विगतमा बेक्कारमा रोएछु भनेर जिस्क्याउनुहुन्छ ।
प्रकाशित: चैत्र ६, २०७१
Post by: tundikhel on June 29, 2016, 03:53:57 AM
अर्को सन्तानको रहर थियो, यत्तिकै भयो
Sunil kumar and jharana thapa (3)
Sunil kumar and jharana thapa (1)बिहेको डेढ वर्षपछि म फेरि फिल्म बनाउन भनेर तातेँ । रेश दाइकै निर्देशनमा धर्मसंकट फिल्म बनाउन सुरु गरियो ।
Sunil kumar and jharana thapa (4)
२०७३ असार १४ गते १७:४५ मा प्रकाशित
Post by: tundikhel on June 13, 2017, 08:28:29 AM
Post by: anand on June 16, 2017, 12:14:23 PM